परमाणु हतियारबारे सनसनीपूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक, भारत र पाकिस्तानसँग कति छन् हतियार? – मुलधार न्युज
Home > प्रवास > परमाणु हतियारबारे सनसनीपूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक, भारत र पाकिस्तानसँग कति छन् हतियार?
१९ भाद्र २०७५, मंगलवार १६:०८
काठमाडौं-अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा विशेष गरि खतनाक हतियारबाट उत्पन्न खतरामाथि विश्वनीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको एजेन्सी फेडरेशन अफ अमेरिकन साइन्टिस्ट (एफएफएस)को प्रतिवेदनले भारत र पाकिस्तानसँग खतनाक हतियार रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
प्रतिवेदनमा यी देशमा परमाणु हतियारको भण्डार बनिरहेको उल्लेख गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
तीन दिन पहिला एफएफएसले जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार पाकिस्तानसँग हाल २८० देखि ३०० परमाणु हतियार छन् भने भारतसँग २६० देखि २८० सम्म परमाणु हतियार रहेको बताइएको छ। यस्तै चीन भने यी देशभन्दा धेरै अगाडी छ।
उसँग ५६० परमाणु हतियार रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। प्रतिवेदनले भारत र पाकिस्तानले यी परमाणु हतियारलाई रणनीतिक रुपमा स्थापना भने नगरेको उल्लेख गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
तर, यी मध्ये आधा हतियार आफ्ना सैन्य एजेन्सीलाई दिइएको बताइएको छ। समाचारअनुसार पाकिस्तानले १४० \_१५० हतियार रिजर्भमा राखेको छ भने यति नै आफ्ना सेनालाई दिएको छ।
यस्तै भारतले १३०\_ १४० हतियार सैन्य एजेन्सीलाई दिएर अन्य रिजर्भमा राखेको छ। यो एजेन्सीको प्रतिवेदनअनुसार उत्तर कोरियासँग भने १० देखि २० वटामात्र परमाणु हतियार छन्। प्रतिवेदनअनुसार अमेरिका, रुस, फ्रान्स र बेलायतले करिब ३६०० परमाणु हतियारलाई आक्रमणका लागि तयारी अवस्थामा राखेका छन्।
तर चीनले भने हालसम्म परमाणु हतियारलाई रणनीतिक रुपमा राखेको छैन। एफएफएसको प्रतिवेदनलाई परमाणु हतियार सम्बन्धिको सबैभन्दा विश्वासिलो मानिन्छ। किन भने यसले स्रोतको आधारसमेत विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन तयार पार्छ।
प्रतिवेदनले पाकिस्तानमा लगातार परमाणु हतियार बनिरहेको उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकी जासुसी संस्थाले अनुमान गरेभन्दा पाकिस्तानसँग परमाणु हतियार धेरै रहेको उसको दावी छ।एजेन्सी